တီဗီတွင် Disney + အားကြည့်ရှုရန်မည်သို့🥇 Emulator.online ▷🥇
ဒစ္စနေး + သည်အီတလီ၌ပြည်သူ့အောင်မြင်မှုနှင့်အတူစတင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ကလေးများအတွက်အကောင်းဆုံးကာတွန်းများကို (ဂန္ထဝင်မှအသစ် Pixar ထုတ်လုပ်မှုအထိ) Star Wars ၏ကမ္ဘာပေါ်တွင်အခြေခံထားသောသီးသန့်တီဗီစီးရီးများနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသောကြောင့်အားလုံးကိုမမေ့ဘဲ အံ့ movies စရာရုပ်ရှင်။ Netflix နှင့် Amazon Prime Video တို့၏အပြိုင်အဆိုင်ပြိုင်ဆိုင်မှုများနေသော်လည်းသုံးစွဲသူများစွာသည် Disney + ကိုမိသားစုတစ်စုလုံးအတွက် streaming subscription အဖြစ်ထားရှိလိုကြသည်။ ယှဉ်ပြိုင်မှုနှုန်း (လက်ရှိတွင်တစ်လလျှင်ယူရို ၆.၉၉ သို့မဟုတ် ၆၉ အတွက်နှစ်စဉ်ကြေးပေးသွင်းခြင်း) ဖြစ်သည်။ € 6,99) ။
အကယ်၍ ယခုအချိန်အထိကျွန်ုပ်တို့သည် Disney + အကြောင်းအရာများကို PC မှသာသို့မဟုတ်အများဆုံးတက်ဘလက်မှကြည့်ရှုရန်သာကန့်သတ်ထားပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးသတင်းများရှိပါသည်။ မည်သည့်တီဗီတွင်မဆိုဒစ္စနေးကိုသတ်မှတ်ပါSmart TV (သို့) ရိုးရှင်းတဲ့ Flat TV (ဖြစ်စေ HDMI port ရှိသလောက်) ဖြစ်စေ။ ဒီတော့ Disney + ကို TV ပေါ်မှာဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဆိုတာကြည့်ရအောင်၊ ဒီပလက်ဖောင်းရဲ့ပိုပြီးရင့်ကျက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုစိတ် ၀ င်စားသောကလေးများနှင့်မိဘနှစ် ဦး စလုံးနှစ်သက်သည်။
အဖတ်ကိုလည်း: Disney Plus လား Netflix လား။ ပိုကောင်းသည်နှင့်ကွဲပြားခြားနားမှုကဘာလဲ
တီဗီမှာရှိတဲ့ Disney + ကိုကြည့်ပါ
Disney + အက်ပလီကေးရှင်းကို Smart TVs နှင့် HDMI ဆက်သွယ်မှုရှိသည့်ကိရိယာများကဲ့သို့သော room ည့်ခန်းဖျော်ဖြေရေးကိရိယာများစွာတွင်ရနိုင်သည်။ ထို့အပြင် 4K UHD နှင့် HDR မြင့်မားသောအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုဒ်များ၏အားသာချက်ကိုရယူနိုင်သည် (ကွန်ယက်၏အခြေအနေနှင့်အသုံးပြုသော devices များကခွင့်ပြုလျှင်) ။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် Disney + အကောင့်မရှိသေးပါကဤလမ်းညွှန်၏အခန်းများမှအကြံပြုချက်များကိုမဖတ်မီ၎င်းကိုရယူခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အကောင့်အသစ်တစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်တရားဝင်မှတ်ပုံတင်သည့် site သို့သွားပြီးတရားဝင်အီးမေးလ်လိပ်စာကိုရိုက်ထည့်ပြီးမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာပါ။
Smart TV ပေါ်ရှိ Disney +
ကျွန်တော်တစ်ခုရှိရင် လတ်တလော Smart TV (LG, Samsung သို့မဟုတ် Android TV) Application Store ကို ဝင်ရောက်၍ လျှောက်လွှာကိုရှာဖွေခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Disney + အကြောင်းအရာကိုပျော်မွေ့နိုင်သည် ဒစ္စနေး +.
လျှောက်လွှာကိုထည့်သွင်းပြီးသည့်အခါစမတ်အပိုင်းကိုဖွင့်ရန်၊ အဝေးထိန်းထိန်းချုပ်မှုရှိခလုတ်ကို နှိပ်၍ ဒစ္စနေး + အက်ပလီကေးရှင်းကို နှိပ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ပိုင်ဆိုင်သောအထောက်အထားများနှင့်အတူလော့ဂ်အင်လုပ်ပါ။ Smart TV မှကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးရှိသည့်အရာအားလုံးမှအကျိုးကျေးဇူးများရရှိနိုင်သည်။ (အကယ်၍ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်သဟဇာတဖြစ်ပါက) 4K UHD နှင့် HDR တို့အပြင်အလွန်မြင့်မားသောအရည်အသွေးရှိခြင်း၊ အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးရရှိရန်အလွန်လျင်မြန်သောအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုလိုအပ်သည် (အနည်းဆုံး download လုပ်ရန် ၂၅ Mbps) ။ မဟုတ်ပါကပုံမှန်အရည်အသွေး (25p (သို့) အောက်နိမ့်) တွင်သာကစားနိုင်သည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်ကိုဖတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။ Smart TV ကိုအင်တာနက်နဲ့ဘယ်လိုချိတ်ဆက်မလဲ.
ကျွန်တော်မကြာသေးမီကဂိမ်း console ကိုချိတ်ဆက်ပါက (PS4, Xbox One, PS5 သို့မဟုတ် Xbox Series X / S), စမတ်တီဗွီတွင်ရရှိသောအရည်အသွေးတူမှအကျိုးကျေးဇူးရရှိပြီးဂိမ်းတစ်ခုနှင့်တစ်ခုအကြားခဏရပ်ရန် Disney + အကြောင်းအရာများကိုကြည့်ရှုရန်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနိုင်သည်။
HDMI မှတဆင့်ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောခလုတ်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် (+ PS သို့မဟုတ်ခလုတ်ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်) console board သို့ခေါ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် Disney + အကြောင်းအရာများကိုကြည့်နိုင်သည်။ လြှောကျလှာ O applications များ နှင့်လျှောက်လွှာဖွင့်လှစ် ဒစ္စနေး +ဖော်ပြပြီးသော console များတွင်ပုံမှန်အားဖြင့်ရှိနေပြီးဖြစ်သည်။ တပ်ဆင်ထားသည့်အက်ပလီကေးရှင်းကိုကျွန်ုပ်တို့မရှာနိုင်ပါကကျွန်ုပ်တို့ကစားရန်စတိုးဆိုင်ဖွင့်ခြင်းသို့မဟုတ်ရှာဖွေရေးခလုတ်ကိုဖွင့်ပြီး app ကိုရှာရန်ဖြစ်သည် ဒစ္စနေး + ရရှိနိုင်သူတို့တွင်။ console များ၌ပင် (TV သည်သဟဇာတဖြစ်ပါက) 4K UHD နှင့် HDR ၏အားသာချက်ကိုရယူနိုင်သည်။ သို့သော်လက်ရှိရောင်းချနေသည့် console များ၏စွမ်းအားအရှိဆုံးမူကွဲများရှိမှသာ (PS4 Pro, Xbox One X, PS5 နှင့် Xbox Series X / S) ။
ဒစ္စနေး + မီးသတ်တီဗွီကပ်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့တွင်စမတ်တီဗီမရှိလျှင်သို့မဟုတ်အထူးအပ်နှံထားသောအပလီကေးရှင်းမရှိပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြင်ဆင်နိုင်သည် မီးသတ်တီဗီ Stick dongle, အမေဇုံတွင်ယူရို ၆၀ အောက်သာရနိုင်သည်။
မီးသတ်တီဗီကိုတီဗွီနှင့်ဆက်သွယ်ပြီးနောက် (ကျွန်ုပ်တို့တွင်တွေ့ရသည့်ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း) ဆက်ကပ်အပ်နှံလမ်းညွှန်), TV ပေါ်တွင်မှန်ကန်သောအရင်းအမြစ်ကိုရွေးပါ, အပိုင်းကိုဖွင့်လှစ် applications များ, ကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံမှန်အားဖြင့်ပစ္စုပ္ပန်များနှင့်အထဲဝင်သူများအကြားရှိ Disney + ကိုရှာဖွေသည်။ Fire TV Stick ပုံမှန်နှင့် Lite ထုတ်ကုန်များသည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောပါဝင်မှု (1080p (သို့) အောက်) ကိုထောက်ပံ့သည်။ 4K UHD ရှိ Disney + အကြောင်းအရာကိုကျွန်ုပ်တို့လိုချင်ပါက ကျနော်တို့အာရုံစိုက်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ် Fire TV Stick 4K Ultra HDပိုမိုမြင့်မားသောစျေးနှုန်း (ယူရို ၆၀) ဖြင့် Amazon တွင်ရနိုင်သည်။
ဒစ္စနေး + သင်၏ Chromecast
အိမ်တိုင်းတွင်ယခုရှိနေသောအလွန်ကျော်ကြားသောဂီယာစက်တစ်ခုဖြစ်သည် Chromecast ကို google, Google site ပေါ်တွင်တိုက်ရိုက်ရရှိနိုင်ပါသည်။
HDMI dongle ကို TV နှင့် home Wi-Fi သို့ချိတ်ဆက်ပြီးသောအခါကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်တွင် Disney + အက်ပလီကေးရှင်းကိုဖွင့်သည်။ (ဤအပလီကေးရှင်းကို Android နှင့် iPhone / iPad တို့အတွက်ရရှိနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သတိရသည်) ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာအထောက်အထားများနှင့်အတူလော့ဂ်လုပ်သည်။ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမည့်အကြောင်းအရာနှင့်အမြန်ဆုံးရရှိနိုင်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိပ်ဆုံးရှိခလုတ်ကိုကျွန်ုပ်တို့နှိပ်လိုက်ပါ ထုတ်လွှတ်ရန်, ဗွီဒီယိုကို Chromecast မှတဆင့် TV ပေါ်သို့လွှင့်ရန်။
Disney + မင်းရဲ့ Apple TV
ကျနော်တို့ကံကောင်းသူတို့တွင်အပါလျှင် Apple TV ပိုင်ရှင်တွေ အခန်းထဲမှာငါတို့သုံးနိုင်တယ် အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးအတွက်ဒစ္စနေး + စောင့်ကြည့်.
Apple အမှတ်တံဆိပ် living ည့်ခန်းသုံးကိရိယာတွင် Disney + ကိုအသုံးပြုရန်၎င်းကိုဖွင့်ပါ၊ system panel သို့သွားပါ၊ Disney + အပလီကေးရှင်းကို နှိပ်၍ ဝင်ရောက်နိုင်သောအထောက်အထားများကိုထည့်ပါ။ လျှောက်လွှာမရှိပါကကျွန်ုပ်တို့ထံအပ်နှံထားသော App Store, search ကိုဖွင့်ပါ ဒစ္စနေး + ၎င်းကို device ပေါ်တွင် install လုပ်ပါ။ ရောင်းရန် Apple TV ကတည်းက 4K UHD င l'HDR ရုပ်မြင်သံကြားသည်ဤနည်းပညာများနှင့်သဟဇာတဖြစ်သရွေ့ကျွန်ုပ်တို့မြန်ဆန်သောအင်တာနက်လိုင်းရှိလျှင် (အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း 25 Mbps download ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်) နေသမျှကာလပတ်လုံး၊ Disney + အကြောင်းအရာကိုအရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤ streaming ဝန်ဆောင်မှုကိုဖွင့်ထားပါက Disney + အားကျွန်ုပ်တို့၏ရုပ်မြင်သံကြားသို့ယူဆောင်လာရန်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။ အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးကို Smart TV ပေါ်ရှိ application ကို configure လုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဤလမ်းညွှန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အခြားနည်းလမ်းများအသုံးပြုခြင်းဖြင့်သာရနိုင်သည်။ စမတ်ဖန်သားပြင်မရှိသောရိုးရှင်းသောမျက်နှာပြင်တီဗီရှိသည့်အသုံးပြုသူများအားလုံးအတွက် ဒစ္စနေး + အကြောင်းအရာကိုကြည့်ရှုရန် Fire TV Stick သို့မဟုတ် Chromecast ကိုသာရယူပါ လျင်မြန်စွာနဲ့အလွယ်တကူ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်မြင့်မားသောအဓိပ္ပာယ်ရှိသောအကြောင်းအရာကိုနှစ်သက်သောပရိသတ်များဖြစ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆောင်းပါးများကိုဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်သင်ဝမ်းသာပါလိမ့်မည် Smart TV တွင် 4K အသုံးပြုနည်း mi Netflix ကို 4K UHD တွင်ကြည့်ရှုရန်နည်းလမ်းအားလုံး။ အခြားတစ်ဖက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်တီဗွီမှထုတ်လွှင့်သောကာတွန်းများကိုကြည့်ရှုရန်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုများကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်ကိုဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ။ အင်တာနက်၊ ဆိုက်များနှင့်အက်ပ်များမှ streaming ကာတွန်းများကိုအခမဲ့ကြည့်ရှုပါ.